Home Wararka Ibbi oo calaacay, eedeyna u jeediiyay ninkii soo isticmaalay shantii sano-Farmaajo
Ibbi oo calaacay, eedeyna u jeediiyay ninkii soo isticmaalay shantii sano-Farmaajo
Xildhibaan hore Cabdiraxman Ibbi oo ahaa nin ku dhawaa in uu nabi ku sheego Farmaajo ayaa hada bilaabay in uu calaacalo eedeyna u jeediyo ninkii (Farmaajo) ahaa ee soo isticmaalay isaga ee shantii sano ee u danbeeysday.
Cabdiraxmaan Aadan Ibbi oo ahaa Xildhibaan hore ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo inuu is-hortaagay in dib loogu doorto Xildhibaan. “Anigu halgame ayaan ahay, waxaan ahaa Nabad iyo Nolol” ayuu Ibbi yiri. Wuxuu ku eedeeyey Madaxweyne Farmaajo inuu qofkuu rabo soo saarayo qofkuu rabana u diidayo xildhibaannimo.
“Ma eedeynayo Cabdicasiis Laftagareen, Madaxweynaha Koonfur Galbeed” ayuu Ibbi carrabka ku adkeeyey. Ibbi wuxuu intaas ku daray in fursadda uu waayay ay tahay hiil Eebbe uga yimid waayo “waxaan aad u taageersanaa Madaxweyne Farmaajo. Waxaad mooddaa in dad aan aad ugu kalsoonaa ay dhabarjabin igu sameeyeen.”
Ibbi wuxuu Xildhibaan ahaa in ka badan 20 sano. Wuxuu ka mid ahaa xildhibaanno aad u taageersanaa Maraxweyne Farmaajo. Maalin dhoweyd Ibbi wuxuu sheegay in xilku wareegto yahay iyo in uusan jirin qof uu eedeynayo.
Previous articleGuddiga qiimeynta doorashada Garbahaarey oo warbixin u gudbiyey Rooble
Next articleReer Gaalkacyo oo fariin culus u diray Farmaajo iyo kooxaha uu ku adeegto
Wasiir dowlaha Sacuudiga oo fartiin soo garsiiyay Madaxweyne Famaajo, diidayna in...
Dabageed “Guudlaawe wuxuu inaanaa Beledwyne, cidna ma hor istaagi karto”